Wasaaradda Warfaafinta oo u baahan inay wax ka bedesho arrin uu caadaystey Raadiyo Muqdisho (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Wasaaradda Warfaafinta oo u baahan inay wax ka bedesho arrin uu caadaystey...
Wasaaradda Warfaafinta oo u baahan inay wax ka bedesho arrin uu caadaystey Raadiyo Muqdisho (Dhegeyso)
(Muqdisho) 12 Feb 2022 – Waxaa jirta arrin u baahan baraarug iyo faham ka yara qoto dheer sida duleed ama sadxiga ah ee haatan ay muuqato in loo fahamsan yahay.
Waxaa arrintaa ku eedaysan guud ahaan Wasaaradda Warfaafinta ee DF Somalia oo u baahan inay arrintan ku laabato una sheegto warbaahinta ku hadasha afka dowladdu inay garasho buuxda arrintaa u yeelato.
Haa, waxaan adeegsanayaa magaca ”warbaahinta dowladda” ee ma lihi ”warbaahinta qaranka”, waayo weli heerkaa ma gaarin oo waxay kaliya ku hadashaa afka dowladda, warbaahin qaran waxaa la oran karaa marka ay si xor ah u adeegsan karaan xitaa dadka ka baxsan hay’adaha dowladda, taasoo ayba haatan tabarta sii kala qaybsan tahay hoggaan xumo darteed.
Yeelkeede, moowduuca aan haatan ka hadlayaa ma aha midkaase aan maalin kale u daayo. Waxaan haatan ka hadlayaa heesaha, ruwaayadaha iyo sheekooyinka ka baxaya warbaahinta DF, gaar ahaan Radio Muqdisho ee lagu dhex daayo magaca ”Raadiyo Muqdisho”, iyadoo uu ujeedku yahay in aysan isticmaalin warbaahinta gaarka ihi.
Bale, cillada arrintan ku jirtaa waa inay muujinayso faham darro ka jirta in hay’addani tahay mid dadwayne sidaa darteedna wax kasta oo yaalla ay yihiin hanti guud oo ay dabcan leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo ay ku jiraan idaacadaha gaarka ihi (national asset), sidaa darteed, in marka lasii daayo hees ama ruwaayad qaraami ah la dhex geliyo Raadiyo Muqdisho si aysan dadka kale u adeegsanin waa ku takrifal awoodeed iyo si xun u maamulidda hanti guud.
Idaacadda gaarka ihi xaq ayay u leedahay inay hesho nuqul ka mid ah heestaas ama ruwaayaddaas waayo ma aha wax ay Raadiyo Muqdisho gaar u leedahay ee xoolo umadeed, ma lihi Kaydka Idaacadda halla siiyo idaacadaha kale, balse xitaa haddii ay u baahdaan heeso, ruwaayado ama wixii kale ee ay u baahdaan waa inay idaacadaasi heli karaan oo loo duubaa iyadoo aan laga iibinaynin ama lagu dhibaynin, maadaama hantidani tahay mid lagu sameeyey canshuurta dadwaynaha.
Dhaqankan oo soo bilowday waagii hoggaamiye kooxeedyada oo Raadiyo Muqdisho la siiyey magaca ”Codka Shacabka”, ayaa ah mid dib u eegis faham ku jiro oo wacyi sarreeya u baahan.
Hoos ka dhegeyso sida heestii Baydhabo loo dhex marsiinayo magaca Raadio Muqdisho.
Previous articleMaraykanka oo keenay caqli uu ku cuno lacag balaayiin ah oo Afganistan ka taalla dalkiisa (Qorshe cusub)
Next articleMuuqaal naxdin leh oo muujinaya haween iyo ilmo yar yar oo ay dhaleen oo la wada tooganayo oo la ogaadey goobta & cidda gaysatey (Daawo)